Ithegi: I-HubSpot CRM | Martech Zone
Ithegi: I-HubSpot CRM
I-MakeWebBetter: Yakha kwaye ukhulise iShishini lakho le-Ecommerce ngeWooCommerce kunye Hubspot
Akukho mathandabuzo ngokufikelela kude kweHubspot njengeCRM kunye neqonga lokuzenzekelayo kunye neWordPress njengeNkqubo yoLawulo lweMxholo. Kungenxa yokuba iyiplagi elula kunye nokongezwa, iWooCommerce ibisoloko ikhula ekuthandeni njengeqonga le-ecommerce ukuze liphumeze ngokulula. Ngelixa iWindowsPress ikhuphe eyayo iCRM, iqonga alinakho ukukhula kweHubspot ngokukwazi kwayo ukuqhuba inkqubo ukuya ekufumaneni nasekugcinweni kwezicwangciso zombutho. Ukudibana okuhlawulekayo kweHubspot
NgoMvulo, Meyi 13, 2019 NgoMvulo, Meyi 13, 2019 Douglas Karr
Kwiintsuku zokuqala zeshishini, ukulawula ulwazi malunga nabafowunelwa kunye nabathengi akunzima. Nangona kunjalo, njengoko ishishini lakho likhula kwaye njengoko ufumana abathengi abaninzi kunye nokuqesha abasebenzi abaninzi, ulwazi malunga nabafowunelwa lusasazeka kumaspredishithi, iincwadana, amanqaku ancangathi, kunye neenkumbulo ezingacacanga. Ukukhula kweshishini kuyamangalisa kwaye kuza nesidingo sokucwangcisa ulwazi lwakho. Kulapho i-HubSpot CRM ingena khona. IHubSpot CRM yakhiwa ukusuka emhlabeni ukuya phezulu ukuze ilungele okwangoku
Databox: Ukulandela umkhondo weNtsebenzo kunye nokuFumana iiNgcaciso kwiXesha leXesha
NgoLwesihlanu, Agasti 10, 2018 NgoLwesihlanu, Meyi 21, 2021 Douglas Karr
IDatabox sisisombululo sedashboard apho unokukhetha khona kuninzi lwendibaniselwano eyakhelweyo okanye usebenzise ii-API kunye nee-SDKs ukudibanisa idatha ngokulula kuyo yonke imithombo yakho yedatha. Uyilo lweDatabox yabo ayifuni nayiphi na ikhowudi, ngokutsala kunye nokwehla, ukwenza ngokwezifiso, kunye nokunxibelelana kwemithombo yedatha elula. Iimpawu zeDatabox zibandakanya: Izilumkiso-Cwangcisa izilumkiso ngenkqubela phambili kwiimetriki eziphambili ngokutyhala, i-imeyile, okanye iSlack. Izikhokelo-iDatabox sele inamakhulu eethemplate ezilungele